ဗုဒ္ဓဘာသာ (၃) မျိုး | မေတ္တာရိပ်
သိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်ချက် (၁၀) မျိုး →
ဗုဒ္ဓဘာသာ (၃) မျိုး	Posted on August 28, 2009	by mettayate ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုသည်မှာ မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကို မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်း မပြုမပြင်၊ မဖြည့်မစွက်၊ မပယ်မနှုတ်ဘဲ လိုက်နာကျင့်သုံးသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မူရင်းအတိုင်း အတည်ပြုထားသည့် ဒေသနာစဉ်များနှင့် ကျင့်စဉ်များပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရာ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ တွင် အရှင်မဟာကဿပ အရှင်အာနန္ဒာတို့ ကြီးမှူးသော မထေရ်များက ပထမသံဂါယနာ ကို တင်တော်မူကြသည်။ ထိုနှစ်ကိုပင် သာသနာတော်နှစ် အမှတ် (၁) ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ သံဂါယနာတင်မှုသည် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောပြထားချက်အတိုင်း အတည်ပြုထားရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဗောဒီးယား၊ လော နိုင်ငံတို့မှာ ကိုးကွယ်နေလျက်ရှိကြသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ မူရင်းအကျဆုံး အမှန်ကန်ဆုံး အသန့်စင်ဆုံးတရားတော်များတည်း။ ထိုတရားတော်များအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးသူများကို မထေရ်မြတ်ကြီးအဆက်ဆက်တို့၏၀ါဒအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးများဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ တရားတော်များသည် မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှစပြီး ယနေ့တိုင်အောင် တည်ရှိနေပြီး အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၊ အရှင်မဟာကဿပ၊ အရှင်အာနန္ဒာ အစရှိသော ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးများမှ စပြီးတော့ မထေရ်မြတ်ကြီးအဆက်ဆက်တို့ သင်ယူပွားများ ဆောင်ထားတော်မူခဲ့ကြသည့် နိကာယ်ငါးရပ်၊ ပိဋကတ်သုံးပုံ ပါဠိတော်များပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုထိုသိက္ခာပုဒ်ပညတ်ရာတွင် ပုဂ္ဂလဇ္ဈာသယ အားလျော်စွာတရားဟောရာဌာနတို့၌ မြတ်စွာဘုရားဟောထားအပ်ကုန်သော ပကိဏ္ဏကဒေသနာတော်သည်သာလျှင် အဋ္ဌကထာ မည်၏။
ရဟန်းတို့ အချို့အရဟတ္တဖိုလ်၌ အချို့အနာဂါမိမိဂ်၌ တည်စေလျက် ဥပနိဿယကင်းကုန်းသော ရဟန်းတို့ကို အချို့နတ်ပြည်လမ်းကြောင်း၌တည်စေလျက် ဒီဃနိကာယ်အတိုင်းအရှည်ရှိသော ဒေသနာတော်ကိုလည်းကောင်း၊ မဇ္ဈိမနိကာယ် ဒီဃနိကာယ်အတိုင်းအရှည်ရှိသော ဒေသနာတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ပြုတော်မူသည်။ ထိုပကိဏ္ဏကဒေသနာတော်သည်ပင် အဋ္ဌကထာ မည်၏။
ထို အဋ္ဌကထာများကို သံဂါယနာသုံးတန် တင်တော်မူကြောင်းကို သီလက္ခန်အဋ္ဌကထာ စသည်တို့၏ အစဦးပိုင်း၌ ပြဆိုထားပြီးဖြစ်ကြသည်။ ထိုအဋ္ဌကထာများရှိနေလျက် အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသသည် အဘယ်ကြောင့် နောက်ထပ်အဋ္ဌကထာများကို ရေးသားရသနည်းဟုဆိုလျှင် ထိုအဋ္ဌကထာများကို သီဟိုဠ်ကျွန်းသို့ အရှင်မဟိန္ဒထေရ်ဆောင်ယူသွားပြီး သီဟိုဠ်ကျွန်းသူများအတွက် အက္ခရာတင်ရေးသားထားခဲ့သဖြင့် အခြားကျွန်းသာများ သင်ယူမှုမဖြစ်နိုင်ကြ၍
ထိုသီဟိုဠ်ဘာသာကိုပယ်ပြီး မာဂဓာဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုလျက်လည်းကောင်း၊
ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ အစဦးပိုင်းဂါထာနဲ့အညီ အကျယ်ဖြစ်သော မူလအဋ္ဌကထာစကားများကို အကျဉ်းချုံးလျက်လည်းကောင်း၊
အားလုံးသောအဆုံးအဖြတ်တို့ကို မကြွင်းကျန်စေဘဲ ပြည့်စုံစေလျက်လည်းကောင်း
ဘုရားရှင်ဟောထားသော အစဉ်ကို မကျော်လွှားဘဲ အစဉ်လိုက်တည်စေလျက်လည်းကောင်း၊ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထို အဋ္ဌကထာ များကို သာသနာနှစ် (၉၃၇) ၀န်းကျင်တွင် ပြုစုရေးသားထားကြောင်း သိရပါတယ်။
လက်ရှိအဋ္ဌကထာများ၊ အခြားအဋ္ဌကထာများ နှင့် ဋီကာများသည်လည်း အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသသည် ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် ဘုရားရှင်၏သေနာပါဠိတော်တို့ကို ထင်သလိုဖွင့်ပြရေးသားထားသည့်ကျမ်းစာများ မဟုတ်ကြပေ။
တချို့နေရာများတွင် ပါဠိတော်နှင့် အဋ္ဌကထာတွင် ကွာခြားမှု ရှိကောင်းရှိပါမယ်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင် ပါဠိတော်ကို ဦးစားပေးပါလိမ့်မယ်။
ဟီနယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ – နိမ့်ကျသည့်ယာဉ်ဟူ၍ မဟာယာန တို့က နာမည်တပ်ခဲ့သည်။
သာသနာနှစ် ၁၀၀ တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် ၀ဇ္ဇီပုတ္တကဂိုဏ်း (မဟာသံဃိကဂိုဏ်း) မှ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာသည့်ဂိုဏ်းပင် ဖြစ်သည်။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကဲ့သို့ မူရင်းတရား အစစ်အမှန်တွေကိုလည်း အတိအကျ မလိုက်နာနိုင်- မဟာယာနတွေလောက်လည်း ပြုပြင်ဖြည့်စွက်ပယ်နှုတ်ဖို့ မလုပ်ချင်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဟီနယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟု ခေါ်ဆိုသည်။
ထိုဂိုဏ်းသည် ရှေးက အိန္ဒိယပြည် ဂန္ဓာရတိုင်း၊ ကသ္မီရတိုင်းအထိ အနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းတလျှောက် ပြန့်ပွားခဲ့ကြသည်။
သဗ္ဗတ္ထိဂိုဏ်း၊ သုတ္တန္တိကဂိုဏ်း စသည်ဖြင့် နာမည်တွင်ခဲ့ကြသေးသည်။ ယခုအခါ မဟာယာနတို့၏ ၀ါမျိုခြင်းကိုခံလိုက်ရသဖြင့် တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သလောက်ဖြစ်သွားလေသည်။
ဟီနယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းစာများ နှင့် မဟာယာန ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း၏သမိုင်းကြောင်း
မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက် သာသနာနှစ် ၁၀၀ အရောက်တွင် ဝေသာလီပြည်သား ၀ဇ္ဇီပုတ္တကရဟန်းများသည် ဘုရားရှင်၏၀ိနည်းပညတ်တော်ထဲက အချက်(၁၀)ချက်ကို မိမိတို့လိုသလိုပြုပြင်၍ ကျင့်သုံးကြသည့်အတွက်ကြောင့် သံဃာစည်းဝေးပြီးတော့ ကမ္မ၀ါစာဖတ်ပြီး ၎င်းဝဇ္ဇီပုတ္တကရဟန်းများကို နှင်ထုတ်ကြပါသည်။ နှင်ထုတ်ခံထားကြရသူ ၀ဇ္ဇီပုတ္တကရဟန်းတို့က စိတ်တူသဘောတူ သံဃာများနှင့် ဒကာဒကာမများကိုပါ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီး ကောသမ္ဗီပြည်မှာ သံဃာတစ်သောင်းတို့ဖြင့် ဒုတိယသံဂါယနာ (စင်ပြိုင်)ကို ပြုလုပ်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ သံဂါယနာကို မဟာသံဂီတသံဂါယနာဟု သမုတ်ပြီး ဂိုဏ်းသစ်ကိုလည်း မဟာသံဂီတိဂိုဏ်း (သံဃာများကိုအစွဲပြု၍ သံဃိကဂိုဏ်း ဟုလည်း) ခေါ်တွင်သည်။
၎င်းဂိုဏ်းသည် မြတ်စွာဘုရား၏ မူရင်းတရားတ်ာများကို စတင်၍ ပြုပြင်သည့်ဂိုဏ်း ဖြစ်သည်။
၎င်းဂိုဏ်း၏ အခြေခံအယူဝါဒမှာ သဗ္ဗံအတ္ထိ- အားလုံးဟာ အစစ်အမှန် အနေအားဖြင့် အမြဲတမ်းရှိနေကြတယ်။
၎င်းဂိုဏ်းက ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟာ လူသားဘုရားမဟုတ်ဘူး။ နိဗ္ဗာန်ဘုံမှာ အမြဲတည်ရှိနေပြီး ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မရှိခြင်းကြောင့် လူသားတွေ မမြင်ရတဲ့ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရား ဖြစ်တယ် ဟူ၍ ယူဆကြသည်။
ထို့ပြင် လူ့ပြည်မှာတရားဟောနေတဲ့ဘုရားဟာ နိမ္မိဘုရား (ကိုယ်ပွားဘုရား) သာဖြစ်တယ် ဟူ၍ ယူဆကြသည်။ ဤအချက်သည် မဟာယာနဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း၏ မျိုးစေ့တစ်စေ့ပင်တည်း။
သာသနာနှစ် (၆၅၀) ၀န်းကျင်တွင် ၀ဇ္ဇီပုတ္တကဂိုဏ်း ကို ကြည်ညိုသော သကမင်းမျိုး ကနိသျှကဘုရင်က ၀သုမိတြမထေရ်ကို ဥက္ကဋ္ဌ၊ အဿဃောသမထေရ်ကို ဥပဥက္ကဋ္ဌ တင်မြောက်ပြီး ဂန္ဓာရတိုင်း (ယခုနောက်ပါကစ္စတန်) ဇလန္ဓရမြိုး ကုဝနကျောင်းမှာ သံဂါယနာ တင်ပြန်သည်။ ယင်းသံဂါယာနာ၏ ထူးခြားချက်မှာ ကနိသျှကဘုရင် က သံဃာတော်တွေကို ပိဋကတ်အဖွင့်ကျမ်းများကို သက္ကတဘာသာဖြင့် ရေးသားစေတော်မူခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရေးသားပြုစုထားသောကျမ်းများ ထွက်လာကြပြီး ၀ိဘာသာကျမ်းကြီးများ ဟု ထင်ရှားကြပါသည်။
သဗ္ဗတ္ထိဂိုဏ်း၏ အခြေခံအယူဝါဒမှာ သဗ္ဗံအတ္ထိ- အားလုံးဟာ အစစ်အမှန် အနေအားဖြင့် အမြဲတမ်းရှိနေကြတယ်။
သုတ္တန္တိကဂိုဏ်း၏ အခြေခံအယူဝါဒမှာ သတ္တ၀ါ၏ သန္တာန်မှာရှိနေသည့ သိမ်မွေ့သောဝိညာဉ်သည် မပျက်မစီးဘဲ တည်ရှိသည်ဖြစ်၍ တစ်ဘ၀ကနေ တစ်ဘ၀သို့ ကူးပြောင်းနေသည်။ ရုပ်တရားတွေကတော့ အဆင့်ဆင့်စိတ်ဖြာခွဲခြမ်းကြည့်လိုက်လျှင် နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ဘာမျှမရှိခြင်းကိုသာ တွေ့ရသည့်အတွက်ကြောင့် သုညသာဖြစ်သည်။ ဤသုတ္တန္တိကဂိုဏ်းကို သင်္ကန္တိကဂိုဏ်းဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသေးသည်။
ဤဂိုဏ်း ၂ဂိုဏ်းသည် မဟာသံဃိကဂိုဏ်းကြီးမှ ဆက်ပွားဂိုဏ်းများဖြစ်ပြီး ဤဂိုဏ်း ၂ဂိုဏ်းမှ ထပ်ဆင့်ပွားလာကြသည့် မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်းနှင့် ယောဂါဝစရဂိုဏ်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
သာသနာနှစ် (၇၀၀) မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်း (နာဂဇ္ဇု၏ သုည၀ါဒ)
မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်းကို ဦးဆောင်သူမှာ ရှင်နာဂဇ္ဇုနမထေရ် ဖြစ်သည်။
သုတ္တန္တိကဂိုဏ်း၏ သုည၀ါဒကို အခြေခံ၍ မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်းသားတို့သည် လောကမှာအရာရာတိုင်းအစစ်အမှန် ရှိသည်- မဟုတ်ည့်အတွက်ကြောင့် အားလုံးကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် အဖန်ဖန် ငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့် နောက်ဆုံးမှာ အစစ်အမှန်ဟူ၍ ဘာမျှမရှိကြောင်း၊ သုညမျှသာရှိကြောင့် သဘောပေါက်အောင် ငြင်းပယ်မှုပြုရမည် ဟူ၍ ယူရသည်။
မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်း၏ ဘာမျှမရှိခြင်းသဘောတရားသည် ပန်းအိုး၏အတွင်းဘက်မှာ ဘာမျှမရှိခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ အခေါင်းရှိနေခြင်းကိုလက်ခံပြီးလျှင် ၎င်းအခေါင်းရှိနေခြင်းသည်ပင် ပန်းအိုး၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ ၎င်းအခေါင်းရှိနေခြင်းကြောင့် ပန်းထိုး၍ရသည်။ ပန်းအိုး၏အတွင်းဘက်မှာ ဘာမျှမရှိခြင်းသည် ပန်းအိုး၏အနှစ်သာရဖြစ်သကဲ့သို့ မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်း၏ ဘာမျှမရှိခြင်းသဘောသည်လည်း အရာခပ်သိမ်း၏အစစ်အမှန်တရားအနေဖြင့် မရှိခြင်းသဘောကို ပြသသည့် ပရမတ္ထသုညဖြစ်သည်ဟုလည်း ရှင်းပြကြသည်။
ဤမဇ္ဈိမိကဂိုဏ်း သည် ခရစ်နှစ် (၂) ရာစုတွင်စတင်ခဲ့ပြီး မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာသည် မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်း၏ဂိုဏ်းဆက်ပင်တည်း။
သာသနာနှစ် (၉၀၀) ယောဂါဝစရဂိုဏ်း (အသင်္ဂ၏၀ိညာဏ၀ါဒ)
ယောဂါဝစရဂိုဏ်းကို ခေါင်းဆောင်သူမှာ ရှင်အသင်္ဂမထေရ် ဖြစ်သည်။
မဟာသံဃိကဂိုဏ်း၏ ဘုရားနှစ်ဆူဝါဒကို အခြေခံ၍ ယောဂါဝစရဂိုဏ်းသားတို့သည် စိတ်ဝိညာဉ်သာလျှင် အရှိတရားဖြစ်သည်ဟူ၍ ယူဆကြသည့်အတွက်ကြောင့် ၀ိညာဏ၀ါဒဂိုဏ်းဟုလည်း အမည်တွင်ပါသည်။
၀ိညတ်ခေါ်ဆိုသည့် ကိုယ်နှုတ်အမူအရာကောင်းခြင်းရှိမှသာ တရားဖြစ်သည်ဟူ၍လည်း ယူဆကြသည့်အတွက်ကြောင့် ၀ိညတ္တိမတ္တတာဂိုဏ်း ဟုလည်း အမည်တွင်ပါတယ်။
ယောဂါဝစရဂိုဏ်းက တီထွင်ထားသည် ဘုရားပွားတို့မှာ –
၁) ဓမ္မကာယဘုရား– မလှုပ်မရှားဘဲ မူလအဘာဝအတိုင်း တည်ငြိမ်နေလျက်သန့်ရှင်းသော အာလယ၀ိညာဏဓါတ်ကြီး (ထူးခြားသောနာမ်ဓါတ်ကြီးတစ်မျိုး) သည် တထတာ (အမြဲတမ်းထိုအတိုင်းရှိနေခြင်းသဘော၊ သူ့အတိုင်းရှိနေသည့်သဘော သန့်စင်သောဝိညာဏဓါတ်ကြီး) နိဗ္ဗာန်ဘုံမှာ အမြဲတမ်းရှိနေသည့်ဘုရား။
၂) သမ္ဘောဂကာယဘုရား– ဈာန်ချမ်းသာကိုခံစားနေတော်မူသည့် ဘုရား။ ခန္ဓာတော်သည် အလွန်သိမ်မွေ့လွန်းသောကြောင့် ၎င်း၏ခန္ဓာတော်ကို ဘုရားလောင်းတွေကတောင်မှ မမြင်နိုင်ဘူးလို့ ယူဆကြသည်။
၀ိညတ္တိမတ္တာသိဒ္ဓိကျမ်းမှာ – သမ္ဘောဂကာယဘုရားကို နှစ်မျိုးခွဲပြထားသည်။ ပရသမ္ဘောဂကာယ (ဘုရားလောင်းတွေက မြင်နိုင်ကောင်းသော ဈာန်ချမ်းသာခံစာနေသူ) နှင့် သမ္ဘောဂကာယဘုရား (ဘုရားလောင်းတွေက မမြင်ရနိုင်သော ဈာန်ချမ်းသာကိုခံစားနေတော်မူသည့် ဘုရား။)
၃) နိမ္မာနကာယဘုရား– တထတာနိဗ္ဗာန်မှာရှိနေသည့် အာဒိဗုဒ္ဓဟု ယူဆခံရသည့် အာလယ၀ိညာဏဓါတ်ဘုရားကြီးက ဖန်ဆင်ပြီးလူ့ပြည်သို့ လွှတ်လိုက်သူ။
သာသနာနှစ် (၁၀၀၀) ခရစ်နှစ် (၅၀၀)အရောက်တွင် ယောဂါဝစရဂိုဏ်းအကြီးအကျယ် ပြန့်ပွားခဲ့ကြောင့် သိရပါသည်။
သာသနာနှစ် (၁၀၀၀) ခရစ်နှစ် (၅၀၀)တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုက မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်း၏ သုည၀ါဒကို တဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာကြသကဲ့သို့ ယောဂါဝစရဂိုဏ်း၏ အာလယ၀ိညာဏဓါတ်ကြီးကိုလည်း လူကြိုက်များလာကြပါသည်။
သာသနာနှစ် (၁၀၀၀) ခရစ်နှစ် (၅၀၀) တွင် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်းတွင် အစွန်းအဖျားလောက်မှာသာ အနည်းအကျဉ်းမျှ ကျန်ရှိတော့ပါသည်။
ထိုအချိန်မှ တဖြည်းဖြည်းခြင်းဖြင့် မူလဂိုဏ်းကြီးနှစ်ဂိုဏ်းတို့သည် ဆင့်ပွားဂိုဏ်းများ၏ ၀ါးမြိုခြင်းကိုခံရပြီး မူလနာမည်ပျောက်ကာ ဟီနယာနဗုဒ္ဓဘာသာဟု နာမည်တွင်လာကြရပါသည်။ နောက်တွင် မဟာယာနအမည်ခံသည့်ဂိုဏ်းတို့က ကြီးထွားလာကြသည့်အလျှောက် မူလဂိုဏ်းကြီးများကတော့ လျှော့ပါးသွားကြရပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဟီနယာနအမည်ခံကြရသည့် မူလဂိုဏ်းကြီးနှစ်ဂိုဏ်းစလုံး မဟာယာနအမည်ရနေသည့် ဆင့်ပွားဂိုဏ်းကြီးအတွင်းသို့ ပါဝင်ပေါင်းစည်းသွားကြသည်။
မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်းနှင့် ယောဂါဝစရဂိုဏ်းတို့သည်လည်း အားကြီးလာသည့်အလျှောက် မူလနာမည်များတိမ်ကောလာပြီး မဟာယာနဟူ၍ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ထွန်းလာကြောင်း သိရပါသည်။
မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်းအမည်ရသော မဟာယာနဂိုဏ်းသည် တရုပ်ပြည်သို့ရောက်ရှိပြီး တီယင်တိုင်ဂိုဏ်း ဟု နာမည်သစ်ဖြင့် ထင်ရှားလာပြန်ပါသည်။
ယောဂါဝစရဂိုဏ်းအမည်ရသော မဟာယာနဂိုဏ်းသည် တရုပ်ပြည်တွင် ရှေလွန်ဂိုဏ်းဟုလည်းကောင်း၊ ဂျပန်ပြည်တွင် ဟိုဆိုဂိုဏ်းဟု လည်းကောင်း နာမည်သစ်ဖြင့် ထင်ရှားလာပြန်ပါသည်။
မဟာယာနသည်လည်း နေရပ်ဒေသအလိုက် အယူအဆ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားသည်။
မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ– ကြီးမြတ်သောယာဉ်ဟူ၍ မဟာယာန တို့က နာမည်တပ်ခဲ့သည်။
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ ကာလ၊ ဒေသ၊ ပုဂ္ဂလ အစရှိသော အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဘုရားရှင်၏ တရားတော်တို့ကို ပြုပြင်ပြီး သာဝကအဖြစ်၊ ပစ္စေကအဖြစ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘဲ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဖြစ်ဖြင့်သာ နိဗ္ဗာန်ကို ရနိုင်သည်ဟူ၍ယူဆသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်သည်။
သာသနာနှစ် ၆၀၀ ခန့်တွင် စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဂိုဏ်းဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းဝင်းများ အနည်းအပါးမျှသာ ကျန်တော့သည်။
တိဘက်၊ ဆိကင်၊ ဘူတန်၊ နီပေါ၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ဗီယက်နမ် အစရှိသောနိုင်ငံတို့မှာ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကိုးကွယ်နေကြသည်။
ဟီနယာန နှင့် မဟာယာန ခေါ်ထွင်ရခြင်း အကြောင်းရင်း
မူလဂိုဏ်ကြီးများဖြစ်ကြသော သဗ္ဗတ္ထိဝါဒဂိုဏ်းနှင့် သုတ္တန္တိကဂိုဏ်းတို့သည် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ဖြင့်သာလျှင် နိဗ္ဗာန်ဝင်စံနိုင်သည်မဟုတ်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓေါအဖြစ်၊ သာဝကရဟန္တာအဖြစ်လည်း နိဗ္ဗာန်ဝင်စံနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ယာန(ယာဉ်) သုံးပါးလုံးကို လက်ခံကြသည်ဟု မှတ်ယူကြရပါသည်။ ထို့ပြင် တထတာနိဗ္ဗာန်၊ အာလယ၀ိညာဏဓါတ်ကိုလည်း လက်မခံကြပေ။
ဆင့်ပွားဖြစ်လာကြသော မဇ္ဈိမိကဂိုဏ်းနှင့် ယောဂါဝစရဂိုဏ်းတို့ကမူ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ဖြင့်သာလျှင် နိဗ္ဗာန်ဝင်စံနိုင်ကြောင်းကိုသာ လက်ခံကြသည်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓေါအဖြစ်၊ သာဝကရဟန္တာအဖြစ်လည်း နိဗ္ဗာန်ဝင်စံနိုင်သည်ကို လက်မခံကြပါ။ ထိုကြောင့် ယာနတစ်ပါးတည်းကိုသာ လက်ခံကြသည်ဟု မှတ်ယူကြရသည်။ တထတာနိဗ္ဗာန်၊ အာလယ၀ိညာဏဓါတ်ကိုလည်း ၎င်းတို့၏ အရေးအကြီးဆုံးတရားအဖြစ်ပင် ယူဆထားကြပါသည်။
မူလဂိုဏ်းကြီးနှစ်ဂိုဏ်းသည် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော သမ္မာသမ္ဗောဓိယာတစ်ခုတည်းကို လက်မခံဘဲ ကိုယ်ကျိုးသက်သက်ကိုသာကြည့်သည် ပစ္စေကဗောဓိယာနနှင့် သာဝကဗောဓိယာနတို့ကိုပါ လက်ခံခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ သတ္တ၀ါတို့၏အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်တော်မူကြသည့် ဘုရားလောင်းတို့၏အဆင့်ကိုနှိမ့်ချထားခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ဟီနယာနဗုဒ္ဓဘာသာ- နိမ့်ကျသောယာဉ်ဟုခေါ်ပြီး
သူတို့ကိုကျမှ ကြီးမြတ်သော သမ္မာသမ္ဗောဓိယာတစ်ခုတည်းကို လက်ခံယုံကြည်သူများဖြစ်သော်ကြောင့် မဟာယာန-ကြီးမြတ်သောယာဉ်သာ လက်ခံယုံကြည်ော ဗုဒ္ဓဘာသာဟူ၍ နာမည်ခံလာကြသည်။
ယခုခေတ်တွင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို ဟီနယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဟု ထင်မှားနေကြပါသည်။ မဟာယာန နဲ့ ဟီနယာန ကွဲပြားချိန်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်ကွယ်နေပြီဖြစ်၍ ၎င်းကွဲလွဲမှုတွင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ မပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာသည် သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ ထွန်းလင်းပြန့်ပွါးနေပါတယ်။
မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းပြုဆရာများမှာ သာသာနာနှစ် (၆၀၀) တွင် ရှင်အဿဃောသ၊ သာသာနာနှစ် (၇၀၀) တွင် ရှင်နာဂဇ္ဇုန၊ သာသာနာနှစ် (၉၀၀) တွင်ရှင်အသင်္ဂ၊ ရှင်ဝသုဗန္ဒု အစရှိကုန်သော ဘုန်းတော်ကြီးများဖြစ်ကြသည်။
မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းစာများသည် သာသနာနှစ် (၇၀၀) နောက်ပိုင်းရောက်မှ မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်တွေကို အနည်းငယ်မျှလောက်သာ မှီငြမ်းပြုလျက် မိမိတို့အယူဝါဒအတိုင်း ဖွင့်ဆိုဖော်ပြရေးသားထားကြသည့် စာများသာဖြစ်သည်။ ဘုရားဟော ကျမ်းဂန်များ မဟုတ်ကြပေ။
အထူးခြားဆုံးအယူဝါဒမှာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာတို့က ၁) ဘုရားဖြစ်ပြီးလည်း နိဗ္ဗာန်ဝင်စံနိုင်သည်။ ၂) ပစ္စေကဗုဒ္ဓါဖြစ်ပြီးလည်း နိဗ္ဗာန်ဝင်စံနိုင်သည်။ ၃) တပည့်သာဝကရဟန္တာဖြစ်ပြီးလည်း နိဗ္ဗာန်ဝင်စံနိုင်သည်။ ဤသို့နိဗ္ဗာန်ဝင်စံနိုင်ပုံ သုံးနည်းရှိသည်ဟူ၍ ယူကြသည်။ ထို့ကြောင့်မဟာယာနတို့က ထေရ၀ါဒတို့ကို သမ္မာသမ္ဗောဓိယာန၊ ပစ္စေကဗောဓိယာန၊ သာဝကဗောဓိယာန ဟု သုံးနှုန်းကြသည်။
မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာ တို့ကမူ ဘုရားဖြစ်ပြီးမှသာလျှင် နိဗ္ဗာန်ဝင်စံနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ မဟာယနသည် သမ္မာသမ္ဗောဓိယာန တစ်ခုတည်းသာလျှင် လက်ခံကြသည်။ (ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ၊ တပည့်သာဝကရဟန္တာအဖြစ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်မ၀င်စံနိုင်ဟူ၍ ယုံကြည်ကြသည်။
ဤအချက်၌ မဟာယာနတို့၏ အယူဝါဒကို အတိအကျပြောရလျှင် ဘုရားဖြစ်ပြီးမှ နိဗ္ဗာန်ဝင်သည်ဟု မပြောနိုင်ဘဲ နိဗ္ဗာန်ဝင်စံပြီးမှသာလျှင် ဘုရားဖြစ်သည်ဟူ၍သာ ပြောရမည်။
မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက သူတို့ကအမြတ်ဆုံးယာဉ်ဖြစ်သော သမ္မာသမ္ဗောဓိယာန တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ နိဗ္ဗာန်ကို သွားနိုင်သည်ဟူ၍ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် သူတို့၏ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာ ဟု နာမည်တပ်၏။
မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာ ခေါင်းဆောင်များသည် မိမိတို့တရားတွေကို မှန်ခြင်းမှားခြင်းအပေါ် အရေးမထားကြဘဲ လူကြိုက်များပြီးနောက်လိုက်ဘာသာဝင်များလျှင် ပြီးရောဟူ၍သာ အရေးထားကြသည်။ ထို့ကြောင့် ခေတ်ကာလအလိုက် လူကြိုက်များသည့် အယူအဆအမျိုးမျိုးတွေကို ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေထဲသို့ သွတ်သွင်းပြီးတော့ အမျိုးမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲပစ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
သို့ဖြစ်၍ ရှေ့ပိုင်းမဟာယာနတရားများမှာ ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များကိုမူရင်းအဓိပ္ပါယ်ဖြင့် အတော်အတန်တွေ့ကြရသော်လည်း နောက်ပိုင်းမဟာယာနတရားများမှာကျတော့ ဗုဒ္ဓ၏မူရင်းတရားများထဲမှ သစ္စာလေးပါး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၊ နိဗ္ဗာန်၊ အသင်္ခတ အစရှိသော စကားလုံးများလောက်ကိုသာ တွေ့ကြရပါသည်။ ထိုစကားလုံးများမှာလည်း အနက်အဓိပ္ပါယ်ကျတော့ မူရင်းတရားတော်များနှင့် တခြားစီပင် ဖြစ်ကြနေပြန်သည်။
မဟာယာန၀ါဒတွင် ဘုရားလောင်းတို့သည် သူတို့ကျင့်ရမည့် ဒသဘူမိ ခေါ် အကျင့် ၁၀ ခုတို့ကို ကျင့်ပြီးသွားလျှင် ထိုတထတာသဘာဝကြီး နှင့် တစ်သားတည်ဖြစ်သွားပြီး နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိသွားကြပါသည်။ ဤသို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးမှသာလျှင် ဘုရားဖြစ်ကြရသည်။ ထိုတထာတာနိဗ္ဗာန်တွင် ပွင့်တော်မူပြီးဘုရားကြိးများက နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ခံစားနေလျက် ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် တထတာသည် သန့်ရှင်းသော သဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော်ကြီးပင်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ယူဆကြသည်။ တထာသည် သန့်စင်သော အာလယ၀ိညာဏဓါတ်ကြီးဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည့်နှင့်အညီ အာလယ၀ိညာဉ်ဆိုသည်မှာလည်း ကုသိုလ် အကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေနှင့် ကောင်း မကောင်းတွေကို သိုမှီးထားရာဖြစ်သော စိတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၀ိညာဉ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြပါသည်။ ထိုစိတ်မျိုးသည်ပင် မဟာယာနနိဗ္ဗာန်မည်၏ဟု ဆိုလိုပါသည်။
အချို့မဟာယာနတို့က တထတာနှင့် အာယ၀ိညာဉ်သည် အတူပင်ပဲ ယူဆကြသော်လည်း တချို့က မတူဟု ယူဆကြသည်။
ထို့ပြင် အာလယ၀ိညာဉ်ကြီးမှာ ဖြစ်မှုသဘော ပျက်မှုသဘောရှိသည်ဟု ယူသူများရှိ၍ ၎င်းဓါတ်ကြီးမှာ ဖြစ်မှုသဘော ပျက်မှုသဘောမရှိဘဲ အမြဲတမ်းတည်ရှိနေသည်ဟု ယူဆသည်များလည်းရှိကြသည်။
အ၀လောကိတေသွာရ ဘုရားလောင်းသည် ဘုရားအဖြစ်ကိုယူနိုင်ပါလျက်နှင့် မယူသေးဘဲ တစ်လောကလုံးကို နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပြီးမှပဲ သူကတော့ နိဗ္ဗာန်ကိုယူမည်ဟုပင် ဆိုပါသည်။ သည်နည်းဖြင့် ဘုရားလောင်းတွေက ဘုရားတွေထက် လောကအကျိုးကို သယ်ဆောင်နိုင်ကြသည်ဟူ၍ ယူဆကြသည့်အတွက်ကြောင့် ဘုရားတွေထက် ဘုရားလောင်းတွေကို ပိုပြီးတော့ အရေးထား ပူဇော် ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။
နမ အဘယဒ္ဒဒ အ၀လောကိတေသွာရယ ဗောဓိဆတွာယ မဟာဆတွယာ (ဘေးရန်ကင်းစေတတ်သော ကြီးမြတ်သောသတ္တ၀ါဖြစ်သော အ၀လောကိတေသွာရဘုရားလောင်းအား ရှိခိုးပါ၏) ဟူ၍ ဂါထာမန်းသလိုအကြိမ်ကြိမ်ရွတ်ဆိုနေလျှင် ကပ်ကြီးသုံးပါးကို ကျော်နင်းနိုင်သည်။ သဘောင်္ပျက်ဘေး။ မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ အကျင့်ဘက်ဘေး အစ်ရှိသည့်ဘေးအားလုံး ဒုက္ခအားလုံးတို့မှ ကင်းလွတ်နိုင်သည်ဟု ယူဆကြသည်။
၎င်းးအပြင် တခြားဘုရားလောင်းမှာ မဉ္ဇူသီရိဘုရားလောင်း၊ သမန္တဘဒြဘုရားလောင်း၊ အာကာသဂဗ္ဘဘုရားလောင်း၊ ကိတ္တဂဗ္ဘဘုရားလောင်း၊ မေတ္တယျဘုရားလောင်းစသည်များပင်ဖြစ်ကြသည်။
မဟာယာနများက ဘုရားလောင်းကိုသာ ဦးစားပေး၍ ကိုးကွယ်ကြသည့်အတွက်ကြောင့် ပညာထက် ကရုဏာက ပို၍အရေးကြီးသည်ဟုလည်း ယူဆကြသည်။ အ၀လောကိတေသွာရ ဘုရားလောင်းသည် အသွင်အမျိုးမျိုးရှိသကဲ့သို့ နာမည်လည်းအမျိုးမျိုးရှိတတ်သည်။
Ven. Dr. W. Rahula ရဲ့ Theravada-Mahayana Buddhism ..( From: Gems of Buddhism Wisdom , Buddhist Missionary Society , Kuala Lumpur, Malaysia,1996 )
(1) Both accept Sakyamuni Buddha as the teacher.
(2) The Four Noble Truths are exactly the same in both schools.
(3) The Eightfold Path is exactly the same in both schools.
(4) The Paticca-samuppada or the Dependent Origination is the same in both schools.
(5) Both rejected the idea ofasupreme being who created and governed this world.
(6) Both accept Anicca,Dukkha, Anatta anf Sila, Samadhi , Panna .
These are the most important teachings of the Buddha and they are all accepted by both schools without questions
မှတ်ချက်။ ထေရ၀ါဒနဲ့ မယာဟာနဗုဒ္ဓဘာသာ တွေရဲ့ကွဲပြားချက်တွေကို မြန်မာပြည်ရှိဆရာတော်များနှင့် အနောက်တိုင်းတွေရေးတဲ့ စာအုပ်တွေများဟာ ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။ ဒီပို့စ်ကိုတင်ရခြင်းမှာ ဗဟုသုတ ရစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာလည်း ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
This entry was posted in မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← သဘောထားမှန်ပါစေ
One Response to ဗုဒ္ဓဘာသာ (၃) မျိုး
Ashin kusala says:	December 25, 2010 at 7:39 am	အလွန်ကောင်းတဲ့ တင်ပြရေးသားချက်ပါပဲ။ အဓိက သော့ချက်တွေကိုသာ ထိထိမိမိ ရေးသားတင်ပြသွားတဲ့အတွက်အကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ ထိထိမိမိ သိရှိသွားစေပါတယ်။ မဟာယာနအကြောင်း ဖတ်တာများပါပြီ အချို့အချက်တွေကို သိပ်မရှင်းခဲ့ဘူး။ ဟီနယာနဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘုရားလောင်းကို ဘာလို့ ဦးစားပေးကြတာလဲ စသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ